Joornalka Archives - Machadka Indheergaradka Somaliland
Machadka Indheergaradka Somaliland > Bologa > Joornalka
Gudbintii Tifatiraha-1 Machadka on February 19, 2019
Indheergarad (intellectual) waxa uu dadka u yahay qof meeqaamkiisu ka sarreeyo inta caadiga ah. Taana wuxuu ku kasbaday in uu leeyahay astaan muhiim ah: naqdin. Indheergaradku asalkiisaba wuxuu u jiraa in uu wax naqdiyo. Wuxuuna naqdintiisaa ku soo bandhigaa habab kala duwan, oo uu u weyn yahay qoraalku. Sida uu qabo Edward Said, kaalinta indheergaradku waa in uu naqdiyo awoodaha jira. Awoodahaana waxa ka mid ah midda siyaasadeed. Dhameyso Akhriska “Indheergarad la Yeeshay!” →
Gudbintii Tifatiraha-1 Machadka on September 4, 2018
(Position Statement of Somaliland Intellectuals on Upcoming Parliamentary & Municipal Election 2019)
Wakhtiga ayaa aduunka ugu qiima badan. Hanti waa la heli karaa waana la waayi karaa, lakiin wakhti kaa lumay dib looma soo celin karo. Mushkiladaha ummadda Somaliland haysta waxaa kaw ka ah wakhtiga oo aan la qiimayn si macno darana inooga luma. Mida kale, ummadda Somaliland sida arrimuhu u kala mihiimsan amba mudan yihiin wax ugama qabtaan. Dhameyso Akhriska “Mowqifka Aqoonyahanka Somaliland ee Doorashada Wakiiladda & Degaanka 2019” →
Idaajaa: Gardaro Garab Ogeyd Dheh
Gudbintii Tifatiraha-1 Machadka on June 26, 2018
Soo Dhaweyntii Idaaja
Jawaabtii Kaariye siiyey Idaaja
Sheekadda Idaaji waa Saambuuse Laga Eedaamay – Adimay!
Been ma sheegto taariikhdu, mana baqato. Bishii Ramdaan oo ah Bil Cibaado iyo Alle ka cabsi ayaa iga soo gashay Barnaamij dib u eegis iyo xasuusin iga ah oo aan dib ugu jaleecay ‘Silsiladdii DEELEY’ ee xigmadda iyo Caqliga fayow xambaarsaneyd, Weliba waxay Diiradda Saareysaa Raggii ku jiray sidii ay u kala caqliga badnaayeen una kala geesi sanayaan. Taasoo salka ku haysa Xaaladda dhabta ah ee dadka iyo dhulka Somalida – Shalay iyo maanta. Dhameyso Akhriska “Idaajaa: Gardaro Garab Ogeyd Dheh” →
Laba Is Huran: Heshiiska Dekadda iyo Aqoonsiga Somaliland
Gudbintii Tifatiraha-1 Machadka on April 26, 2018
Inkastoo fikir ururin (Opinion Poll) aan dadweynaha Somaliland laga qaadin khuseeya heshiiska dekadda Berbera iyo saldhiga milateri ee ku mataaneysan, haddana rayi caamku wuxuu u jenjeedhaa inla soo dhaweeyey marka la eego hadal heynta dadweynaha, laakiin waxaa jira waxgarad badan oo dibad iyo gudaba jooga oo aan ku qanacsaneyn sida wax loo wado aamisanna in aqoonsiga Somaliland ka madhnaan arrinkan. Dhameyso Akhriska “Laba Is Huran: Heshiiska Dekadda iyo Aqoonsiga Somaliland” →
Sigaarka: Dilaaga Dahsoon!
Gudbintii Tifatiraha-1 Machadka on November 23, 2017
Sigaarcabiddu waxa ay ka mid tahay sababaha ugu horreeya ee geerida keena. Waxaa lagu dooday in saddexdii qof ee sigaar qiijiyaba, hal qof uu u dhinto tubaakada. Sidaas oo ay tahay, weli dadku waa ay ku sii adkaystaan. Waxa inta badan laga hadlaa halisaha duleed ee sigaarka. Kansar, neefsashada oo xumaata, hawada oo dikhawda iyo qodobbada la mid ah. Balse kasmanafeeddu (psychology) waxa ay xoogga saartaa dhan kale oo qodobbadaa dhammaystir u ah; saamaynta nafeed iyo dhimir ee qiijinta sigaarta. Dhameyso Akhriska “Sigaarka: Dilaaga Dahsoon!” →
Gargaarka Shisheeye: Gumayn mise Gurmad?!
Gudbintii Tifatiraha-1 Machadka on October 6, 2017
Waxaa Qoray: Ilyaas Maxamed Xuseen & Cabdicasiis Guudcadde
Qoraalkani waxa uu gorfayn iyo kala-haadin ku samayn doonaa mawduuca xaasaasiga ah ee gargaarka shisheeye (foreign aid) iyo saamayntiisa. Waxa uu soo bandhigi doonaa doodaha isku lidka ah ee ku aaddan qodobkan, isaga oo ku eegi doona indho dhexdhexaad iyo garaad gorfayneed. Dhameyso Akhriska “Gargaarka Shisheeye: Gumayn mise Gurmad?!” →
Baraha Bulshada mise Buugta?
Waqtiga kaaga baxa baraha bulshada sannadkii waxa aad ku akhrin kartaa 200 oo buug!
Waxaa Qoray: Charles Chu (Af Ingiriisi )
Waxa Tarjumay: Cabdicasiis Guudcadde [Af Soomaali]
Qof baa maalin wayddiiyay Warren Buffett sirta guushiisa. Waxa uu Buffett xusay miisaanka buugta oo waxa uu yidhi: “Maanta oo kale akhri 500 oo bog. Waa tabtaa sida aqoontu u hawlgasho. Sida dulsaarka cufan ayaa ay u biirtaa. Waana wax aad qaban kartid, balse waa aan dammaana qaadi karaa in badankeedu aanu qaban doonin.”
Labo gu’ ka hor markii aan odhaahdaa Buffett arkay, wax baa si ahaa. Waxa ay ahayd Deseenber, 2014. Shaqadii aan ku riyoon jiray ayaa aan helay. Maalmo door ah ayaa inta aan dulfadhiisto shaqadii aan ku riyoonayay ka fekeri jiray, “Ilaahayoow, ma sidan baan ahaanayaa afartan gu’? Ma rabo in aan sidan u dhinto…” Dhameyso Akhriska “Baraha Bulshada mise Buugta?” →